I-Semalt Ixwayisa Ngomhleli WesiRashiya Oxhomeke Ezigidini Ze "I-Pharmacy yaseCanada" Ama-imeyili ogaxekile
Igor Artimovich uthelele amakhulu ezinkulungwaneni zamakhompyutha emhlabeni wonke nge-software ye-botnet okuthiwa yi-Festi. Uphendule amadivayisi wekhompuyutha kumaseva okugaxekile okuzenzekelayo. U-Alexander Peresunko, isazi esihamba phambili esivela ku-8 (Semalt , utshela ukuthi icala lakhe kanye nokubukeka kwenkantolo kuye kwasiza ukukhomba phansi kwe-underworld e-shayashi ehlanganisa amaseva ogaxekile, izinkampani ezidakamizwa ezidakamizwa, nobugebengu bokuthiwa.
Izikhangiso ze-pharmacy ezivame ukuvela njalo ebhokisini lakho le-imeyili zibukeka zivumelekile futhi ziyiqiniso. Kodwa-ke, izikhalazo zamuva zenkantolo kanye necala likaGigor liveze amaqiniso amangazayo. Ngokusho kweNew York Times, logaxekile wancenga ama-pharmacy aseCanada futhi waxhunyaniswa nezidakamizwa ezingekho emthethweni eRussia naseCanada. Yasebenzisa ukuvikeleka kwenethiwekhi ye-lax nokuthengwa komthengi ukusabalalisa amakhokhithi ayingozi nakancane amakhasimende angaziwa emhlabeni wonke.
Igciwane kanye namakhompyutha anegciwane lesandulela ngculaza banamandla okukhiqiza izigidi ezigidi zamakhompiyutha e-spam amanga ekhemisi, futhi eziningi ze-imeyili ezinjalo zithunyelwa kubathengi nsuku zonke. I-Operation Pangea VI, isonto elidumile lezenzo ngokulandela umthetho, lizama ukuvala amawebhusayithi e-bogus internet pharmacy. Iningi lwakamuva, i-Operation Pangea VI yavala inombolo enkulu yama-URL e-website ahloselwe ukuhlaselwa kogaxekile, futhi i-FDA yiyokuqala ukubika icala..Isheke esisheshayo lebhokisi lakho lokungenayo lingabonisa ukuthi lawa mawebhusayithi aqala kanjani imisebenzi yokugaxekile kwi-intanethi.
Izingozi kumakhasimende ezenziwa izikhangiso zamakhemisi zamanga zivame. Esinye sezikhathazo eziyinhloko ukuthi lawa mawebhusayithi athengisa izidakamizwa ngaphandle kwemithi futhi aphula imithetho ye-FDA kanye nemithetho yase-Federal. I-FDA ne-Allspammedup.com ibika ukuthi amakhasimende athengisa izidakamizwa kusuka ku-spam-advertised pharmacy zamanga alawulwa ukweba ikhadi le-debit, ulwazi lomuntu siqu nezinombolo zekhadi lesikweletu. Ngaphezu kwalokho, amadivayisi wabo ekhompyutheni namaselula abekwe eceleni futhi athumela njalo ama-imeyili ogaxekile kubasebenzisi abaningi kwi-intanethi. Ngisho nabathintana nabo abathengi be-intanethi bancike ekuhlaselweni kwe-malware kanye ne-virus, futhi izinhlelo zabo zitheleleke kakhulu.
I-FDA iye yaxwayisa abathengi mayelana nezitolo zamakhemikhali ezingamanga futhi ifuna wonke umuntu ukuba ahlale ephephile kwi-intanethi. Izigebengu eziningi kakhulu zithumela imali kubathengi abasebenzisa amawebhusayithi anonya ukuthenga izidakamizwa nemikhiqizo yabo eyintandokazi. Cishe wonke amawebhusayithi anjalo afakwe kwi-Federal Agency yokuphoqelela umthetho kanye nama-FDA agents. Abamele amanga ama-pharmacies ase-intanethi noma ama-superstores abiza izisulu, bebazisa ngemvelo yezidakamizwa zabo. Zonke izingcingo ezinjalo zingekho emthethweni, futhi lezi zikhungo ezibizwa ngokuthi izomthetho zizama ukukhokha imali engu-$ 20,000. Izisulu zicelwa ukuba zikhokha inhlawulo ngaphambi kokuba izidakamizwa zabo zinikezwe emakhaya abo. Ngokuvamile babe nokuhwebelana okukhohlisayo okubekwe eceleni kwamakhadi okukhishwa ngamakhadi namakhadi esikweletu. Kulula kulabo abathengi ukuzivikela ezitolo ze-pharmacy ezikhohlisayo. Akufanele nanini babelane ngolwazi lwabo lomuntu nanoma ubani ku-intanethi. Ngaphezu kwalokho, kufanele bafunde ukuthi bangalondoloza kanjani imali futhi kufanele bazivikele ezidakamizweni ezingalungile kanye nezigebengu ezithengisa izidakamizwa ezingekho emthethweni.